I-China iLed Canopy Izibane zeSitishi seGesi, ukuKhutshwa kweKhanya yokuKhanya, i-Led Canopy Fixtures Manufacturer
Inkcazo:Izibane zeLayopy Led For Station Station,Ukulungiswa kokuKhanya kokuKhanya,UkuLungiswa kweeLayopy Fixtures,Izibane zeSolar Canopy,,
Home > Imveliso > Ukukhanya kwe-LED ye-Canopy > 60w Led Canopy Light
Iintlobo zeMveliso ze- 60w Led Canopy Light , singabakhiqizi abakhethiweyo baseChina, Izibane zeLayopy Led For Station Station , Ukulungiswa kokuKhanya kokuKhanya ababoneleli / umkhiqizo, iimveliso eziphezulu zexabiso eliphezulu ze-R & D kunye nokuvelisa, sinemisebenzi epheleleyo emva kokuthengisa kunye nenkxaso yobuchwepheshe. Khangela phambili ekusebenzisaneni kwakho!
I-Canopy Lighting Fixture 75W 5000K  Qhagamshelana Ngoku
I-Canopy Lighting Fixtures 50W  Qhagamshelana Ngoku
60W I-Garage ye-Canopy yokuGcina ukuKhanya ngaphandle  Qhagamshelana Ngoku
I-50W ye-Low Bay Garage Lighting Motion Sensor  Qhagamshelana Ngoku
75W I-Low Bay Lighting Fixture Motion Sensor  Qhagamshelana Ngoku
I-75W i-Garage yokuPaka yokuPaka yokuGcina i-Lighting Motion Sensor  Qhagamshelana Ngoku
50W Garage yokupaka Ukukhanya okuKhutshwa kweziNto zokuThutha  Qhagamshelana Ngoku
75W Garage yokuPaka UkuKhanya ukuKhutshwa koMbane  Qhagamshelana Ngoku
50W Ukukhanya kweGaraji lokuLungisa ngeShukumo seMoto  Qhagamshelana Ngoku
50W Ingaphandle I-Canopy Lighting Retrofit Kit  Qhagamshelana Ngoku
Izixhobo zokukhanyisa zangaphandle ze-Canopy 75W  Qhagamshelana Ngoku
75W Igalaji yokupaka i-Canopy Lighting Fixtures  Qhagamshelana Ngoku
50W Ukukhutshwa ngaphandle kwe-Canopy Light Fixtures ETL  Qhagamshelana Ngoku
75W Ukukhanyisa kwangaphandle kwimizila yokuPaka kweGaraji  Qhagamshelana Ngoku
I-50W Led Ceiling Canopy Fixture  Qhagamshelana Ngoku
I-ETL IP65 75W i-Canopy Light Bulbs  Qhagamshelana Ngoku
I-Led Canopy Light Retrofit Kit Lighting 50W  Qhagamshelana Ngoku
I-75W ETL iLing Outy Lighting Lighting  Qhagamshelana Ngoku
I-ETL 50W i-Garage Canopy Light  Qhagamshelana Ngoku
I-75W I-Lights Light Led for Gas stations  Qhagamshelana Ngoku
I-50W i-Canopy Lights Led Kit IP65  Qhagamshelana Ngoku
I-Canopy Lighting Fixture 75W 5000K
I- Philips Led Canopy Lighting yethu IP65, ejoliswe ngokukodwa kwizikhululo zegesi kunye neegalaji zokupaka. Inkqubo yokuKhanya kweLayopy Led kufanelekile ukufakela okanye ukufakwa kwendawo ephakamileyo. Ukulungiswa kokuKhanya kweLed Canopy...
I- Led Canopy Fixture 50w IP65, ejoliswe ngokukodwa kwizikhululo zegesi kunye neegalaji zokupaka. Lezi zixhobo zokukhanyisa izibane zokuLima kufanelekile ukufakela okanye ukufakwa kwendawo ephakamileyo. I- Cree Led Canopy Lighting unama-60W, i-100W,...
Ixabiso lento: USD 32 / Piece/Pieces
Ukulungiswa kweGaraji yokuLungisa I-60W inikezela ngokuphakama kwe-lumen e-6600lm nge-110lm / w. Umgangatho we- Ceiling Light Canopy iyakhiwe kakuhle kwaye uya kumangaliswa yimalini yendawo yokukhawulela. Umgangatho wethu ophezulu we- Outdoor Canopy...
Wethu I-Low Bay Light Fixtures ineendlela zokukhawuleza ngokukhawuleza ngoko kungekho mfuneko yokuvula ukukhanya kweLed Low Bay ukufakela okanye ukugcinwa kweso sithuba. ezenziwe ngamacandelo aphezulu aphezulu, oku kuKhanya kweGaraji lokuLungisa...
Ixabiso lento: USD 24 / Piece/Pieces
Le Lighting Lighting Led yenziwe nge-Philips SMD 3030. 75W Low Bay Lighting Unokulingana ne-200-250W kwi-HPS / HID. I- Low Bay Light Fixture i- Ultra-thin-design Design, usebenzisa uhlobo oluthile lwezinto, uhlobo olusisiseko, oluyi-profile profile....
Yonke iGaraji yokuPhakamisa ukuKhanya kweeGaraji liza kunye nomqhubi-on-board (iDOB) oqhube umda wokukhanya okuqhelekileyo ukwenzela ukubonelela ngokukhanyisa ngokugqithiseleyo nge-9000 lumens, elilingana ne-120 lm / W yokuphela okuphezulu kunye...
Iwaranti yesi-3 Ukukhanya kweGaraji Uchungechunge lunokusetyenziswa ngokubanzi kumbane wokungaphandle okanye wesiqingatha ngaphandle, njengendawo yokupaka indawo, ukupakishwa kweendawo okanye ukucwangcisa i-electronics, ukugcinwa kwezinto zokugcina...
75w Ukupaka yethu super eqaqambileyo Garage Light zenziwe nge-High Lumen Isiphumo se-LED chips, i-5000k emhlophe yelanga. Le 75W Garage Light ekubekwa Led kuyalingana 250W HPS / sazifihla / ukukhanya HALIDE simiso ngendlela ephezulu 120lumens watt...
I-Sensor ye- Garage Light Motion ye- LED Powered LED Unobumba obuphezulu be-LED kunye ne-Philips LUMILED ezinezikhanyiso ezinkulu. Ukukhanya koGaraji kunye neSensor Motion kuludwe lwe- ETL oluthetha ukuba ezi ziGaraji zokuLungisa ukuKhanya kweGaraji...
Yenza i-175W yokulungiswa kweempahla kunye ne-50W yangaphandle ye-Canopy Lighting . Isiphumo sayo esingu-6000lm siphumelele ngokuphindwe kabini kwimizila yamandulo, ukukhanyisa yonke indawo ebumnyama. Le Canopy Led Retrofit Kit I-ETL ibonakaliswe...
I-75w yethu yee- Canopy Lighting iifayili zeGesi Inika i-9000 Lumens kwi-5000K yoMkhanya oMnyama. Izibane zemizila yeGesi Station zifana neengelosi zikhanya phezu kwakho. Ukunciphisa i-bill yakho ye-elektroniki ukuya kwi-84%, i-250W ye-HPS / HID...
Ukulungiswa kokuKhanya okuKhanya I-75W ine-LED eyiyo eyi-120Lm / W, i-white-day 5000k emhlophe. Esi sikhululo seGesi siKhanya ngokuKhanya kwee-Canopy sihamba kakuhle ngokusetyenziswa kweendawo zokuhlala kunye nezorhwebo ukusuka kwi-100v ukuya...
Imibala yethu yokukhanya ye-50W ye- Canopy Ukunikezela umbala omhlophe (5000K) umbala wokukhanya kwi-6000 lumens of output, uhambisa ukukhanya okukhanyayo, ukuphakama okuphezulu, ukwandisa ukhuseleko nokukhuseleko. Ukunciphisa ukusetyenziswa...
Lo Mbane wokuKhanya wangaphandle u-ETL uqinisekiswe kumgangatho osebenzayo kunye neemfuno ze-ETL. IiLampu zethu ze- 75W ze-Canopy zi-T okanye ukuSebenziswa koRhwebo kunye neShishino apho kukhanya khona i-Amenity Lighting. I- 75w Canopy yoKhanya...
Indlu eqingqiweyo yokufa kwe-aluminium yokufa, i-Square yokwakheka kwe-sink yokushisa, ukusindisa amandla.Lo lwangaphandle iLed Ceiling Canopy Fixture i-IP65 yamanzi eBakala. Le ngqungquthela i- 50W ine-2 Iinkqubo zokufakela. Ukutshintsha i-100w...
Ukukhanya kwe-Canopy LightWorld ye-70W inikezela nge-8400 LM kwi-5000K yoKhanya kweMini. Uphuculo oluphezulu ukuya kwi-120lm / w! I Dimmable Led Canopy Lights uye p ower ukusebenza ngaphezulu kwe-95% ne kwexesha elide iiyure 50,000. I-75W Led Canopy...
I-Watts ezingama-50 iLed Under Canopy Lighting lifikelela kwi-6000 Lumens kwaye ingathatha indawo ye-HPS / HID / HALIDE izibane 175W. Le Lop Canopy Retrofit yindlela efanelekileyo yokuhamba kunye nokugcina imali! I- Lop Canopy Light Retrofit Kit...
Izibane ze- Canopy ezingama-75W zeeSitishi seGesi zibonelela nge-lumin e-8250lm nge-110lm / w. Umgangatho weLed Canopy Lights Wholesale wakhelwe kakuhle kwaye uya kumangaliswa ukuba ubuninzi bendawo yokufikelela. Umgangatho wethu ophezulu weLed...
Sebenzisa i-50W Canopy Light Bulb ukuthatha indawo ye-175W HPS / HID kwaye ugcine u-80% kwi-bill yakho yombane. Gwema ukutshintshwa kwebhuru rhoqo rhoqo xa ushintshela kule 50W Garage Canopy Light enexesha elingama-50,000+ elilinganiselwe iiyure. I-...
Imibala yethu ye-75W ye- Canopy Lighted for stations I- Gas P ekhanyisa umbala omhlophe (5000K) okhanyayo kwi-8250 lumens ye-output, ikhupha ukukhanyisa okuphezulu, inyuse ukhuseleko nokukhuseleko. Ukukhanya kwePlay Pendant Light ine-2 Iindlela...
Ukukhanya kwethu kwe-50W ye- Canopy Light Led u- 5000k omhlophe ubusuku benziwa kunye noFilipu SMD3030 ii-chips ze-LED. IziLimi eziKhulayo ziLed 50W iyakwazi ukutshintsha indawo ye-175W yeHPS / HID yombane. I- Canopy Light Kit I- wellks for...
KwiChina 60w Led Canopy Light Abaxhasi
60w Led Canopy Light yethu ilinganiselwe iiyure 50,000 ebomini, Led Canopy Lights Kuba Station Gas zizixhobo lampshade kwizinga eliphezulu ukunika banzi indawo elungileyo ukuze ukusasaza ubushushu. Wethu Ukulungiswa kokuKhanya kokuKhanya ilungele ukuzisa ukugqama kwipaki yokupakisha, ikhaya, isakhiwo sezitolo, i-corridor, isicelo sokukhanyisa isikrini esiphezulu. UkuLungiswa kweeLayopy Fixtures unesitya esinyukayo emva komtya, kulula ukuyifaka.Ukulungiswa kwesikhombiso sethu sikhankanywe yiminyaka emihlanu yewaranti engenamkhawulo.
Izibane zeLayopy Led For Station Station Ukulungiswa kokuKhanya kokuKhanya UkuLungiswa kweeLayopy Fixtures Izibane zeSolar Canopy Izibane zeDetro Station